Cilmibaare: Xuduudaha EU kala xiratay oo lagu guuldareeystay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boliis hor-taagan qaxooti doon ka soo degay. sawir: Sawirle: Johan Nilsson/TT
Cilmibaare: Xuduudaha EU kala xiratay oo lagu guuldareeystay
War-bixin lagu dhaleeceeyey xuduudaha EU kala dhigatay
La daabacay torsdag 26 maj 2016 kl 17.00
Xuduudaha la kala dhigey waddammada xubnaha ka ah ururka EU ayaa ah falal wax burburinaya, isla-markaana adkeeynaya jah-wareerka iyo kalsooni-darrida, halkii marka hore loogu talo galey sidii qaxootiga loogu xakameeyn lahaa. Cabirkaa adag ayaa lagu soo bandhigi doonaa baaritaan dawladdu u saartay oo maanta la soo ban-dhigi doono.
Isku dayga sidii lagu xakameeyn lahaa qaxootiga Yurub soo hiigsanaya ayaa la xiriirta ammaanka, isla-markaana saameeysay dhaqaalaha cashuunrta ee bulshada laga qaado, balse aan xal u ahayn dhibaatada aasaasiga ah ee qaxootiga sharci-darrada ku socota, sida uu cilmi-baare Ruben Andersson ku sheegay baarista dawladeedka loogu magar-darey "soo-galooti aan xaddidnayn iyo ilaalinta xuduudaha Yurub " oo uu soo saaray ururka magaciisa loo soo gaabiyo Delmi - Delegationen för Migrationsstudier, kana howl-gala, iskuulka dhaqaalaha ee magaalada London ee caasimadda dalka boqortooyada ingiriiska.
Farriinta war-bixintan laga leeyahay ayaa ah in waddammada Yurub ka maarmaan ilaalinta xuduudahooda ee qaxootiga looga hor-tegeyo mustaqbalka dhow iyo isku dayga hoggaanka EU ee Barugsel iyo sidii ey waddammada ururka xubnaha ka ahi u qayb-san lahaayeen qaxootiga xoogana la isugu geeyo dhaqaalaha sidii wax looga qaban lahaa in abuuro wada-shaqeeyn caalami ah ee la xiriirta qaxootiga iyada oo sal-dhig uu u yahay ururka caalamiga ee Qarammada Midoobey.
Ann Linde, ahan wasiirka cusub ee EU iyo ganacsiga dibadda ayaa ku taabac-san war-bixinta in kontroollada xuduudaha Yurub ey caqabad ku yihiin.
– Nasiib-darro waan ku raac-sanahay. Hase yeeshee dalkan Sweden wuxuu ahaa waddankii qaabilay qaxootiga ugu badan, kolka loo eego tirada bulshada dalka ku dhaqan. Nidaamkii dalka oo khal-khal galay ayaa dhliyay baahida in xuduudaha la xiro ama lagu soo rogo baaritaanno. Tallaabadaasina oo aan loo baahdeen haddii ey waddammada xubnaha ka ah EU si siman u qeyb-san lahaayeen culeeyska qaxootiga, sida ay sheegtay Ann Linde, wasiirka arrimmaha EU iyo ganacsiga dibadda.